40 စီးရီး Servo မော်တာ
60 စီးရီး Servo မော်တာ
80 စီးရီး Servo မော်တာ
90 စီးရီး Servo မော်တာ
110 စီးရီး Servo မော်တာ
1. မော်တာရိုးတံအဆုံးသို့တပ်ဆင်ပါ / ဖြုတ်ပါ၊ မော်တာရိုးတံ၏အခြားဘက်ခြမ်းရှိ encoder ကိုမပျက်စီးစေရန်ကာကွယ်ရန်အတွက်, ၀ င်ရိုးရိုးကိုမထိပါနှင့်။
2. ရိုးတံ၏တုန်ခါမှုကိုကာကွယ်ရန်၊ ပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးစားပါ။
130 စီးရီး Servo မော်တာ
130H စီးရီး Servo မော်တာ
150 စီးရီး Servo မော်တာ
180 စီးရီး Servo မော်တာ
180H စီးရီး Servo မော်တာ
220 Volt Ac Servo Motor, တံခါးပိတ် Loop Stepper Motor Driver, Servo မော်တာ Actuator, Big Servo မော်တာ, Encoder နှင့်အတူ stepper မော်တာ, Hybrid Stepper Motor,